Iwe unoziva here kushandisa mabhegi ekurara mumusasa wekunze?
Nzira yekurara zvakanaka panguva yechando musasa? Kurara zvinodziya? Bhegi rinodziya rekurara rakanyatsokwana! Iwe unogona pakupedzisira kutenga bhegi rekutanga rekurara muhupenyu hwako. Pamusoro pekunakidzwa, iwe unogona zvakare kutanga kudzidza iyo chaiyo pfungwa yemabhegi ekurara kuti udziirwe. Chero bedzi y ...
Nzira yekusarudza tende rekunze?
1. Kurema / kuita chiyero Ichi chinhu chakakosha paramende yemidziyo yekunze. Pasi pekuita kumwe chete, huremu hwakapindirana zvakaenzana nemutengo, nepo kuita kuchinyatso kuenzana nehuremu. Zvichitaurwa zviri nyore, kuita kwakanyanya, mwenje uremu michina inodhura ...
Bharbell squats inoda mapepa epafudzi here?
Ona vanhu vazhinji vachiita barbell squats pavanenge vachida kukora gobvu furo pad (pabendekete pad), rinotaridzika chaizvo kugarika. Asi zvinoshamisa kuti zvinoita sekunge ma novice anga achangodzidzira kutsamwa ari kushandisa macushion akadaro. Nyanzvi dzezvehutano dzinorambidza mazana emakirogiramu e ...
Nzira yekushandisa iyo yoga mutsago
ne admin pane 21-07-20
Tsigira kugara kwakareruka Kunyangwe iyi positi inonzi kugara kwakareruka, hazvisi nyore kune vanhu vazhinji vane miviri yakaoma. Ukazviita kwenguva yakareba, zvinenge zvichinetesa, saka shandisa mutsago! mashandisiro: -Gara pamutsago nemakumbo ako akayambuka zvakasikwa. -Mabvi ari ...
Nzira yekudzoreredza mvura nemazvo kugwinya, kusanganisira huwandu uye huwandu hwemvura yekunwa, une chirongwa here?
Munguva yekugwinya, huwandu hweziya hwakawedzera zvakanyanya, kunyanya muzhizha rinopisa. Vamwe vanhu vanofunga kuti paunowedzera kudikitira, ndipo paunonyanya kurasa mafuta. Muchokwadi, tarisiro yediketi ndeyokubatsira iwe kugadzirisa matambudziko epanyama, saka yakawanda yekudikitira mus ...
Mashandisiro ekushandisa TRX yekudzidzira bhandi? Ndeapi mamhasuru aunogona kurovedza? Kushandiswa kwaro kunopfuura kufunga kwako
Isu tinowanzoona yakamiswa yakasununguka bhendi mune yekurovedza muviri. Iyi ndiyo trx inotaurwa mumusoro wedu, asi havazi vanhu vazhinji vanoziva mashandisiro eiyi elastic band pakudzidziswa. Muchokwadi, ine akawanda mabasa. Ngationgororei zvishoma zvakadzama. 1.TRX kusundira chipfuva Kutanga gadzirira mamiriro. Isu tinoita ...
Kugwinya kunobatsira sei hutano hwepfungwa
Parizvino, kugwinya kwenyika yedu kwave kuita senzvimbo yekutsvagisa inopisa, uye hukama pakati pekurovedza muviri uye hutano hwepfungwa hwatambirwa zvakanyanya. Nekudaro, kuongorora kwenyika yedu munzvimbo ino kuchangotanga. Nekuda kwekushomeka ...
Ndeipi sarudzo yemadhibhuru, iwe unonzwisisa mushure mekuverenga ichi chinyorwa
Dumbbells, semidziyo inosimbisa muviri, inoita basa rakakosha mukuumba, kurasikirwa uremu, uye kuwana mhasuru. Izvo hazvirambidzwe nenzvimbo, nyore kushandisa, zvisinei neboka revanhu, inogona kuveza tsandanyama dzese mumuviri, uye kuve sarudzo yekutanga kune vazhinji b ...
Ndeupi musiyano uripo pakati pekushandira pamba uye munzvimbo yekurovedza muviri?
Mazuva ano, vanhu kazhinji vane sarudzo mbiri dzekusimba. Imwe ndeyekuenda kujimu kunorovedza muviri, uye imwe yekudzidzira kumba. Muchokwadi, idzi mbiri nzira dzekusimbisa muviri dzine zvadzo zvadzo zvazvakanakira, uye vanhu vazhinji vari kukakavara nezve mafambiro ehutano evaviri. Saka newewo t ...
Iwe unoziva here kuti ndeapi akasiyana ruzivo iyo yoga inogona kukuunzira iwe?
Wakambonzwa here wakaparadzaniswa uye wakaparadzaniswa nemuviri wako nepfungwa? Uku kunzwa kwakasarudzika, kunyanya kana iwe uchinzwa kusachengeteka, kudzora, kana kusurukirwa, uye gore rapfuura harina kunyatso kubatsira. Ini ndinonyatsoda kuoneka mupfungwa dzangu uye ndinonzwa kubatana neangu ...
Ndeupi ari nani, latex kuramba bhendi kana tpe kuramba bhendi?
1. Hunhu hweTP kuramba bhendi TPE zvinhu zvine kusimba kwakanaka uye kusimba tensile, uye inonzwa kugadzikana uye kutsetseka. Iyo yakadzingwa yakananga uye inoumbwa neyakawedzera, uye iko kugadzirisa kuri nyore uye kuri nyore. TPE ine varombo mafuta resistanc ...
2021 (39th) China Sports Expo inovhura zvakanakisa muShanghai
Musi waMay 19, iyo 2021 (39th) China International Sporting Goods Expo (inozotumidzwa kunzi 2021 Sports Expo) yakavhurwa kwazvo paNational Convention uye Exhibition Center (Shanghai) .Iyo 2021 China Sports Expo yakakamurwa kuita matatu themed nzvimbo dzekuratidzira ...